Rakibaadda LX1 Eex Nalalka - Nalalka Nalalka ee MediaLight
Ku soo dhowow bogga rakibidda LX1
Iska yaree halista waxyeellada LX1-kaaga cusub. * Fadlan akhri tilmaamahan rakibaadda oo fiiri fiidiyaha rakibida gaaban sanado badan oo aad ku raaxeysaneysay.
* (Dabcan, haddii LX1-kaaga waligiis jabo inta lagu guda jiro rakibidda waxaa lagu daboolayaa LX1 2-Sano oo Dammaanad ah, laakiin maalmo ayey nagu qaadan doontaa inaan ku helno qaybo beddel ah).
Xargaha naxaasta ah ee saafiga ah ee ku jira LX1-kaaga ayaa ah kuwa haga kuleylka iyo korontada, laakiin sidoo kale waa kuwo aad u jilicsan oo si fudud u jeexi kara.
Fadlan ka tag geesaha xoogaa dabacsan oo ha hoos u riixin. (Ma keenayo wax hoos ah, laydhadhkuna ma dhici doonaan). Cadaadiska geesaha ayaa sababi kara iyaga, mararka qaarkood, inay jeexaan.
Waayahay, iyada oo taasi jirto, fadlan eeg fiidiyowga rakibidda.
Fadlan ogow: Inta aan ka shaqeyneyno fiidiyowgeena LX1, waxaan soo bandhigeynaa fiidiyowga rakibidda alaabtayada 'MediaLight'. Nidaamka rakibaadda asal ahaan waa isku mid, in kastoo qaababka qaarkood ay ku kala duwan yihiin alaabada.
Markaad ku dhejineyso LX1 cusub shaashaddaada, haddii aad ku wareegeyso 3 ama 4 dhinac, tusaale ahaan, marka muuqaalkaagu uu saaran yahay derbi korkiisa:
1) Ka cabi 2 inji oo ku yaal geeska bandhigga.
2) Bilow inaad kor ugu kacdo dhanka shaashadda dhinaca ugu dhaw dekedda USB, laga bilaabo AWOOD (bareesin) DHAMMAAD xarigga.
Tani waxay fududeyn doontaa in laga jaro wax kasta oo dherer ah markii aad dhammayso. Haddii muuqaalkaagu aanu lahayn dekedda USB-ga, bilow inaad kor ugu kacdo muuqaalka dhinaca ugu dhow isha korontada, ha ahaato xarig koronto ama sanduuqa bannaanka sida laga helay bandhigyada qaarkood. Haddii ay si toos ah ugu taal bartamaha magaalada, ku rog qadaadiic. :)
Nalalkaagu waxay ku daboolan yihiin damaanad-qaad dhammaystiran oo 2-sano ah waxaanan daboolaynaa rakibidda qalabyada, markaa ha walwelin wax badan. Haddii aad sameyso jahwareer LX1, kaliya nala soo xiriir.
Haddii aad u baahan tahay inaad ka goyso dherer dheeri ah xarig, waxaad ku gooyn kartaa khadka cad ee ka tallaabaya xiriir kasta oo xiriir ah. Ku jar khadka hoose:
Taasi waa inay dabooshaa wax kasta oo loogu talagalay rakibidda marka bandhiggu ku yaal istaag ama buur darbi.
Haddii aad akhrinaysid tan oo aad si buuxda u wareersan tahay, fadlan ha murugoon. Ila soo xiriir ila sheekaysigayaga (midigta hoose ee boggan). Waxaan ku dari doonaa sawirro iyo fiidiyowyo dheeri ah maalmaha soo socda. Waxaan kuu soo galin doonaa LX1-kaaga oo shaqeynaya waqti aan fogeyn.
Sameeyayaasha LX1 Nalalka Nalalka,
Nalalka MediaLight Eexda iyo
Madbacadaha Spears & Munsil Benchmark